Voaloboka - Wikipedia
Ny voaloboka dia voankazo avy amin'ny hazo mandady. Io voankazo io dia azo hohanina tsotra izao (rehefa masaka), na anaovana divay na ranom-boaloboka. Maro ireo mety ho lokon'ny voaloboka masaka: mena, fotsy, maitso, na volomparasy. Ankehitriny dia mety sy misy voany. Ny hazom-boaloboka maniry dia matetika heverina fa ahi-dratsy, satria manakona ny zavamaniry hafa ny fitomboany.
Araka ny FSF (Fikambanana momba ny Sakafo sy ny Fambolena, Food and Agriculture Organization, FAO) dia 7,6 tapitrisa hektara no ampiasaina amin'ny fambolena voaloboka erak'izao tontoo izao. 71%n'ny voaloboka no ampiasaina amin'ny fanaovana divay. 27% no hanina ho toa voankazo tsotra, ary 2% no hanina ho toa voankazo maina. Misy ihany koa ny amahan'ny voka-boaloboka ampiasaina amin'ny fanaovana ranom-boaloboka ho ampiasaina amin'ny fanamamiana ho an'ireo voankazo izay «tsy nampiana siramamy», na «voanjanahary 100%». Mitombo roa isan-jato isan-taona ny velarantany natokana ho an'ny fambolena voaloboka anaovana divay.
Eo ambany ny lisitr'ireo firenena mamokatra divay manokana velarantany betsaka indrindra
Espaina : 11.750 km²
Frantsa : 8.640 km²
Italia : 8.270 km²
Torkia : 8.120 km²
Etazonia : 4.150 km²
Iran : 2.860 km²
Romania : 2.480 km²
Pôrtogaly : 2.160 km²
Arjentina : 2.080 km²
Aostralia : 1.642 km²
Ny voaloboka fotsy dia azo avy amin'ny voaloboka mainty tamin'ny alalan'ny fivoarana. Nampijanona ny fanamboarana antôsianinina ny fiovana tanaty fototarazo roa. Ny antôsianinina no mampamaitso ny voaloboka.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Voaloboka&oldid=768569"
Dernière modification le 1 Mey 2015, à 21:08
Voaova farany tamin'ny 1 Mey 2015 amin'ny 21:08 ity pejy ity.